Torohevitra momba ny fikojakojana ny akanjo fisakafoanana bikiniuit isan'andro
Mba hitazonana ny elastika sy loko mitovy amin'ny bikini amin'ny fahavaratra manaraka, tena ilaina ny fikojakojana isan'andro. Ireto manaraka ireo teboka tokony hofantarina amin'ny fikojakojana isan'andro ny bikini. Manitatra ny fiainanao amin'ny bikini. 1.Cleaning o ...
Lisitry ny marika bikini ambony indrindra 10
Bikini dia mampiasa lamba farafahakeliny sy ny lamba firakotra kely indrindra hampitomboana ny hatsaran'ny vatan'andriamanitra sy postura. Bikini dia mampivoatra ny hatsaran-tarehy ivelany sy ny fahatokisan'ny vehivavy. Inona avy ny marika bikini vehivavy? Ireto misy marika bikini folo ambony notarihin'i La Perla ho an'ny rehetra. No.1 ...
Fampirantiana vokatra miloko an-tsarintany any Canton
Taorian'ny fampandrosoana ny 20 taona mahery, ny Canton Fair Swimwear Show dia namorona vondrom-piarahamonin'izy ireo ary nitondra elite sy matihanina manerana an'izao tontolo izao. Mampiroborobo ny fandraharahana eo amin'ny namana. Ny fampisehoana Swimwear dia tena ankasitrahana. Maro ny fampisehoana milomano maro ankehitriny, ...